KARTUUNKA MAANTA: ”Trump xaq buu u leeyahay inuu ka walaaco duullaanka ay Maraykanka kusoo qaadi doonaan Lionel Messi, Angel Di Maria iyo Sergio Aguero!” – Gool FM
KARTUUNKA MAANTA: ”Trump xaq buu u leeyahay inuu ka walaaco duullaanka ay Maraykanka kusoo qaadi doonaan Lionel Messi, Angel Di Maria iyo Sergio Aguero!”
(New York) 04 Maajo 2016 – Ninka u taagan tartanka xilka madaxwaynenimada Maraykanka ee dhanka xisbiga Jamhuuriga ee Donald Trump ayaa horay u muujiyay aragti aanu jacayl badani ka muuqanin oo ku wajahan dadka reer Latin Ameerika oo uu ku tilmaamay dad isku jira kufsadayaal, dembiilayaal, daroogiistayaal IWM oo fudud ugasoo dusaya xuduudaha koonfureed ee Maraykanka.
TyC Sports oo ah TV laga leeyahay dalkaasi Argentina ayaase haatan barnaamij kajan ah arrintaa ka sameeyay, isagoo sheegay inuu ninkan ka taajirey hantida ma guurtada ihi uu xaq u leeyahay inuu ka walaaco duullaanka ay kusoo qaadi karaan Lionel Messi, Angel Di Maria iyo Sergio Aguero marka Koobka Ameerika xagaaga lagu dhigo dalka Maraykanka.
TV-gan ayaa xitaa soo qaatay muuqaalkii caanka baxay ee uu Trump ku khudbeeynayay nacaybka uu u qabo dadka ka yimaada koonfurta Ameerika oo uu saaray qoraal Spanish ah.
GOOGOOSKA: Real Madrid vs Manchester City 1-0 (Madrid oo markii 14-aad final-ka timid)